'Ndinodada naye': Addison Rae mukomana mutsva Omer Fedi, anozivisa rudo rwake kwaari pa Instagram - Pop-Tsika
'Ndinodada naye': Addison Rae mukomana mutsva Omer Fedi, anozivisa rudo rwake kwaari pa Instagram
Guitarist Omer Fedi akataura kuda kwake TikToker Addison Rae mune yazvino yabviswa Instagram nyaya. Mutambi wegitare weIsrael akatumira nyaya ye Ndiye Zvese izvo posita yemuvhi iyo nyeredzi Rae uye chinyorwa cheBillboard Hot 100 chati yakaratidza rwiyo Gara naThe Kid Laroi naJustin Beiber, iyo Fedi yakaitisa futi.
Instagram mushandisi tiktokinsiders vakabata Omer Fedi's Instagram nyaya isati yabviswa, yaiverenga:
Ini nemwana wangu tiri vaviri nhamba 1 atm Im saka saka ndinodada naye. Hameno kana isu vaviri vekutanga takamboita izvozvo nemuvhivhi nerwiyo? Anyway love you babe
A poso yakagovaniswa tiktokinsiders (@tiktokinsiders)
Kunyangwe vaviri ava vakaonekwa pamwe chete kakati wandei uye vakatora chikamu chenhau, vateveri vanoita kunge vaneta nehukama hwavo. Nezve iyo Instagram nyaya, vamwe vanetiweki vakati:
zvave semavhiki maviri uye ari kuti ndinokuda kare
Imwe mhinduro yakanzi:
Ini handitore nei vanhu r vachiita hombe kuita abt it
Vateveri vanoita kuna Omer Fedi izvozvi zvadzimwa Instagram nyaya 1/3 (Mufananidzo ne Instagram / tiktokinsiders)
mukomana anodhonza mushure mekuswedera padhuze
Vateveri vanoita kuna Omer Fedi izvozvi zvadzimwa Instagram nyaya 2/3 (Mufananidzo ne Instagram / tiktokinsiders)
Vateveri vanoita kuna Omer Fedi izvozvi zvadzimwa Instagram nyaya 3/3 (Mufananidzo ne Instagram / tiktokinsiders)
Zvizhinji paAddison Rae uye hukama hwaOmer Fedi
Mutambi wemadhirama asati atanga kudanana naFedi, Addison Rae akange ari muhukama husina kugadzikana pa-uye-kure neumwe TikToker Bryce Hall. Kunyangwe vaviri ava vakapatsanura gore rapfuura, TikToker akatendeuka mubhokisi akaonekwa mufirimu yaAdisonison Rae Ndiye Zvese izvo .
Mushure mekudaidza hukama hwapera, iye ane makore makumi maviri Kufungidzirwa muimbi akatumira nyaya ye vanhu vaviri vachitsvodana mumimvuri muna Nyamavhuvhu 5 wegore rino iro rakaenderera mberi richinyorwazve naOmer Fedi.
Chinyorwa chakagovaniswa naAdisonison Rae (@addisonraee)
kuudza mumwe munhu kuti unomuda chaizvo
Gitare, uyo ave kuridza Machine Gun Kelly, akataurawo pasi peimwe yeAddison Rae's Instagram zvinyorwa. Mashoko akarava:
Ndiri kudanana newe
Vaviri vakagovana misoro yepamusoro yehukama hwavo pamhepo, kudzamara Fedi azviita Instagram zviri pamutemo kuti iye naAddison Rae vazopedzisira vafambidzana. Gitare akagovana mufananidzo we pachavo pamubhedha .
zvinosekesa zvinhu zvekuita kana iwe uchinetseka
Kubva ipapo, vaviri ava vakaonekwa pamwechete muLos Angeles vachibatwa nepaparazzi.
Amai vaAdisonison Rae Sheri Esterling zvakare akadzivirira mukomana mutsva waRae mune Instagram kutaura. Mune ino yadzimwa posvo, amai vaAdisonison Rae vakataura kuti:
Iye zvechokwadi anoshamisa munhu anoshamisa uye anoita kuti mweya wake upenye. Kumuda
Mashoko aya akauya mushure mekunge vateveri vatanga kuramba Omer Fedi.
mukomana wangu akandinyepera how can i trust him again
kana mukomana akabata ziso kusvika iwe wazviputsa
murume wangu haataure neni nezve hukama hwedu
zvinotora nguva yakareba sei kuti ude murudo psychology
rini zuva remauto bts